डरलाग्दो सपनाले बनाउँछ छोटो समयमै धनी ! कारण जान्नुहोस - Mero Khabar Nepal
डरलाग्दो सपनाले बनाउँछ छोटो समयमै धनी ! कारण जान्नुहोस
पौराणिक ग्रन्थमा सपनाको प्रभाव मानिसको
जीवनमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । मानिसले
सुत्दाखेरी निन्द्रामा देखिने सपनाबाट उसको
जीवनमा असर समेत पार्छ । भविष्यको संकेत समेतगर्छ ।
ज्योतिषहरूका अनुसार सपनाहरू र सपना देखेको समयलाई विचारगरेर सपनाका फलहरू फरक फरक हुने गर्दछन् । सपनाको
दृश्यले भविष्यको सांकेतिक अर्थ दिने गरेको ज्योतिषहरु बताउछन्
मानव प्राणीले डरलाग्दो सपना देख्दा आफूलाईकेही हुने भन्ने डर मनमा हुन्छ । तर, यस्तासपनाहरूले भविष्यमा केहि राम्रो हुने संकेत गर्छ । यस्तासपनाले भविष्यमा सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्ने या अन्य लाभहुने खुलासा भएको छ ।
१) शिर कटेको सपना देख्नु : आफ्नै टाउको काटिएको देख्नुकतिसम्म डरलाग्दो सपना होला ? अनुमान गर्न डर लाग्छ,पक्कै पनि निकै डरलाग्दो हुन्छ तर ज्योतिषका अनुसार यस्तोसपनाले धन लाभ गर्ने सूचना दिन्छ ।
२) खुट्टा बाँधिएको सपना देख्नु : आफ्नो खुट्टा बाँधिएको सपनादेख्दा पनि केही असहज महसुस हुन्छ तर यस्तासपना देख्नु राम्रो मानिन्छ । यस्तो सपनाले राज्य लाभ दिन्छअर्थात् सरकारी क्षेत्रबाट फाइदा हुन्छ ।
३) पहाड चढेको देख्नु : मानिसले पहाड चढ्नु भनेको गाह्रोकाम गर्नु हो भन्ने सोच्छन् । तर तपाईले यही कुरासपनामा देख्नु भयो भने यसले केही फाइदा हुने संकेतगर्छ । पहाड, समुन्द्र, वा खोला पार गरेको देख्नुलेतपाईलाई
धन लाभ हुने संकेत गर्छ ।
४) टाउको दुखेको सपना देख्नु : सपनामा टाउको दुखेको देख्दापनि धन लाभ हुने सम्भावना रहन्छ ।
५) घोडा, हात्ती चढेको सपना देख्नु
: हात्ती, घोडा, कमलमा चढेको देख्दा पनि धनप्राप्तिको सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
यस्ता सपना देख्ने धेरै मानिसहरु विश्वका ठुला ठुलाधनी व्यापारी बनेकोज्योतिषीहरुको दाबी छ ।ज्योतिषीका अनुसार लगातार यस्ता सपना देख्दा छोटोसमयमा धनी बन्नेसम्भावना बढी हुन्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा
Prevमौसम निरन्तर परिवर्तन, पूर्वमा सतर्क रहन आग्रह
Nextबिष्णु माझीको सबैलाई रुवाउने गित सार्वजनिक ( भिडियो सहित)